UkuThimba ngeBlog: Ukucinga + ubuChwepheshe | Martech Zone
UkuThimba ngeBlog: Ukucinga + ubuChwepheshe
NgoLwesihlanu, Julayi 6, 2007 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
UDuane ukusukela Ukucingela + ukuYila Ufunde kakuhle kwaye ungowokuqala ibhlog-tippee ke ndizakumvuza ngeengcebiso ezinkulu zokucoca ibhlog yakhe (esele ilungile!):
Nazi iingcebiso zam zebhlog yakho:
Iinjini zokukhangela zithanda ngenene ukubeka inqanaba kwiindawo eziphezulu ukuba igama lesiza liyahambelana negama lesizinda. Sesinye sezizathu zokuba indawo yam ingaze ibeke phezulu kwi "Marketing and Technology"… ayihambelani ne "douglaskarr". Unesizinda esimnandi kodwa igama lebhlog elahlukileyo. Mhlawumbi unokuthi ngandlela thile ubandakanye "uyilo" kunye "nokutsala" kwisihlokwana sebhlog yakho (ukuba ufuna ukugcina isihloko sebhlog).
Ukugcina abantu bejikeleze, ndingacebisa Iplagi yeZithuba ezihambelanayo kwaye ubeke iiposti ezinxulumene noko emazantsi eposi nganye. Ngale ndlela abantu abakufumanayo ngeNjini yokuKhangela baya kufunda iiposti zakho kwaye ukuba abayifumani ngqo le nto bayifunayo, banokuncamathela kumanqaku ongezelelweyo akwisifundo esinye. Oku kuyanceda nakwi ukudibanisa okunzulu Uluhlu lweeNjini zokuKhangela.
Unesibini uShishino amaqhosha alwela ingqwalaselo yam. Ndiyakholelwa ukuba ungabatsala ngcono abantu ekutyeni kwakho ngokusebenzisa ii-icon ze-RSS zokutya ezingasasebenziyo kwikholamu esekunene endaweni yemifanekiso eluhlaza. (Ndikwacebisa ukusebenzisa i-FeedBurner ukulinganisa ukutya kwakho kunye nokongeza ezinye izinto ezongezelelekileyo, njengokubhaliswa kwe-imeyile)
Izithuba zakho ziyamangalisa, zichanekile kwaye zibhalwe kakuhle. Kananjalo, unentsikelelo yokuhlala kwesinye sezona zixeko zintle kwiPlanethi- iVancouver isathatha # 1, nangona kunjalo. Ukutshatisa isitayile sakho sokubhala kunye nokwazisa ikhaya lakho, ndingathanda ukukubona ufumana umfanekiso omkhulu weToronto, mhlawumbi isibhakabhaka esixakekileyo ebusuku, kwaye ubeke loo nto inomfanekiso wentloko apho imvelaphi enkulu yentloko eblue. Inokuwukhulisa umxholo wakho. Into efana nomfanekiso kwiphepha lakho malunga nayo iya kuba ntle-iyavuya, inemibala… kwaye ibonisa ezinye zoko kuphithizela!
Ibhlog emnandi, uDuane! Kuninzi esinokukufunda kuwe-zombini ngemfundo yakho esesikweni kubudlelwane boluntu, ukuThengisa, kunye nePhysology kunye nomsebenzi wakho wangoku kunye neArhente yeNtengiso. Ngokuqinisekileyo uthatha incoko ukuya kwinqanaba elilandelayo!
UkuThimba ngeBlog: KukuFunda ixesha lokuBuyisa!
Ukuthimba iBhlog: Ukungaqondani okuhle